Umatshini wokucoca oomileyo unjani inani?
Abacocayo abomileyo kangakanani inani lexabiso? Ukutsala abatyali-mali, ukuphuhliswa kwemboni yokucoca oomileyo ngoku kwimarike yotyalo-mali, utyalo-mali ococekileyo ococekileyo ube yintando, ixabiso eliphantsi, inzuzo ephezulu kunye nomngcipheko ophantsi njengoko abatyala-mali babona inzuzo yokutshala imali.
Ufuna ukuvula ucoceko omile, ewe, kufuneka ulungiselele zonke iintlobo zokutyalomali, ukukhethwa kwezixhobo unxibelelwano olungavumelekanga ukungahoywa. Kwaye abacocekileyo abomileyo, njengengxenye ebalulekileyo yezinto zokusebenza zokucoca, zichaphazela ngqo ukusebenza kunye nokuphuhliswa kwabahlambisi abomileyo, ngoko ke ukukhethwa kwerhasi elomileyo abatshali-mali kufuneka bathathele ingqalelo.
Ukukhetha nokuthenga kwabacoceli abomileyo kufuneka kusekelwe kumgangatho wokuqala, akunakupheka. Akukho mgangatho ococekileyo ohlambulukileyo oza kuphazamiseka kuphela ekuhlambuleni umgangatho kunye nophuhliso lwangexesha elide labahlambisi abomileyo, kwaye abacocekileyo abacocekileyo bangasebenzisa iminyaka elishumi elinesibhozo, kwaye kungathatha iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ukuya kumatshini ahlambulukileyo ahlambulukileyo, ukulungisa kwaye i-frequency frequency frequency is high, ngokunjalo ukwandisa imali eninzi, kodwa ukwandisa indleko.
Abacocayo abomileyo kangakanani inani lexabiso?
Ukukhethwa komgangatho wobuncwane obomileyo kukubalulekileyo, kodwa amanani abatyali-mali kufuneka bathathele ingqalelo, emva kokuba zonke iindleko zowesilwanyana esomileyo ngokuqhelekileyo zibalulekile inxalenye yeendleko zabacoca abacocekileyo. Intengo yokucoca i-dryer ithonyelwe yimimandla emininzi, ifuna ukukhetha abacoceli abomileyo, okokuqala kufuneka uqikelele ubungakanani bokucoca i-dryers, i-scale ehlukeneyo ngokubanzi kufuneka i-cleaners cleaners ehlukile, kunye ne-oil cleaners kunye ne-tetrachlorethylene ecocekileyo : abaninzi abacocekileyo abacoca rhoqo bahamba kwi-tetrachlorethylene ococekileyo ococekileyo bafanelekile, ii-oli eziqhelekileyo ezincinci kunye ne-medium-sized oil cleaners zingakhetha abacoceli abomileyo, ngokuqinisekileyo, ixabiso liya kuba nempembelelo enkulu.
Intengo yokucoca i-dryer iya kuchatshazelwa yinkqubo yokucoca i-dryers, imodeli, amandla, kunye neempembelelo ze-brand, i-influenced influence. Abatyalomali ekukhetheni i-washer eyomileyo kufuneka banikele ingqwalasela yokukhetha ezinkulu iimveliso, ngokukodwa ezo ezizimeleyo ezizimeleyo nophando lwezinto zokuvelisa iimveliso zithembeke ngakumbi. Umzekelo ENEJEAN uhlambe iimpahla, ukuvelisa izixhobo zokuhlamba, unembali engaphezu kweminyaka engama-20, uphando oluzimeleyo nophuhliso lwemveliso yokuphuhlisa umgangatho ophezulu kunye nexabiso eliphantsi, ukusuka kwimveliso ukuya ekuthengiseni nasemveni kokuthengiswa kufuneka kubekho iimfuno kunye neenkqubo ezibalulekileyo, kubaluleke ngakumbi ukuya kumthengisi kwixabiso lemveliso, intengo i-20000 yuan i-RMB ENEJEAN i-cleanersers eyomileyo, imodeli eyahlukileyo iya kuba ngumlinganiselo wexabiso, isitshixo kuxhomekeke ekubeni yeyiphi imfuno.
Inqaku lokugqibela: Mhlawumbi kufuneka ukuba uninz...
Inqaku elilandelayo: Yiyiphi i-brand of cleaners cl...